Indlela yokuphendula xa ungayazi impendulo yemibuzo kwiiNtetho eziNtsha
NguRay Anthony, uBarbara Boyd
Udale uluhlu lwayo yonke imibuzo ekulindeleke ukuba isekelwe kwinkcazo-ntetho yakho. Okwangoku kunokwenzeka ukuba ufumane umbuzo osemthethweni okanye emibini ongakhange uyiqwalasele kwaye ekushiya uzibuza, Uvelaphi lo mbuzo- ngaphandle kwentsimi yasekhohlo. Ndiyiphose njani leya?
Ngaphandle kokuba uyi-psychic, ngekhe ulindele yonke into, kwaye ngaphandle kokuba wazi konke, ngekhe wazi yonke into, nangona abanye kubaphulaphuli bakho banokucinga ukuba bayayenza.
Xa ubuzwa umbuzo ongenayo impendulo kuwo, landela ezi zikhokelo:
Qiniseka ngokuzithemba: Ukuba awunampendulo kumbuzo, yamkele nje ngendlela yenyani ngaphandle kokuzenza ngathi uneentloni, udanile, okanye nayiphi na enye impendulo engalunganga nokuba incinci kangakanani. Ngezwi elizinzileyo, eliqinisekileyo lelizwi, yithi, andazi okanye andiqinisekanga ngokupheleleyo, kungoko ndingathanda ukukufumanela impendulo echanekileyo nechanekileyo ngo (nika umhla).
Emva koko, ngendlela ecace gca, bhala phantsi umbuzo kunye neenkcukacha zonxibelelwano zomntu (okanye ukhethe omnye umntu ukuba azenze), ziphande, kwaye zilandele ixesha njengoko zithembisiwe. Cacisa, ukuba kunokwenzeka, ndiza kuqhagamshelana nentloko yethu yezobunjineli namhlanje, kwaye ukuba ishedyuli yakhe iyandivumela ukuba ndiphendule ngokukhawuleza, ndiza kubuyela kuwe ungadlulanga umhla wamva kwemini. Ngaba kulungile?
Jonga abaphulaphuli okanye ingcali: Kuxhomekeka kwisihloko sakho nakubaphulaphuli, ungawubhekisa phambili umbuzo kwiqela ukuba uyazi ukuba kukho umntu okwaziyo ukuhambisa impendulo, ndiyazi ukuba kukho abantu apha abanamava kule ndawo. Nazo naziphi na iingcinga zokuphendula loo mbuzo? Rhoqo, abantu bayakulangazelela ukubandakanyeka ekuthetheni nasekubonakaliseni ulwazi lwabo.
Unokwazi ngesithethi esinobuchule esichasayo imibuzo ngoburharha ngendlela efanelekileyo ngaphandle kokungakhathali.
Ukuba ufumana imibuzo enje, Ucinga ukuba itekhnoloji izakuba phi kwiminyaka elishumi, uyaphendula, ndinqwenela ukuba bendiyi-Oracle yaseDelphi ukuyiphendula loo nto, kodwa obu buchwephesha buqhubela phambili ngokukhawuleza kwaye ukukhula kwayo akunakulinganiswa, kwibhola yekristale yempendulo. Nangona kunjalo ndiza kukunika ezam iingcinga zokuba obu buchwephesha bunokuya phi kule minyaka mithathu izayo…
Ukuba umbuzo ungaphandle kwendawo yakho yobungcali okanye amava, ungabuza ukuba iqela okanye ilungu labaphulaphuli elinobungqina obufanelekileyo linokuphendula.
Umzekelo, ukuba uyinjineli kwaye umntu othile ubuza umbuzo wezezimali, ungawubhekisa lo mbuzo komnye umntu owaziyo ukuba ngumntu wezezimali okanye we-accounting. Ungathetha into enje, Tanisha, uyi-MBA. Ngaba unayo nayiphi na ingcaciso malunga nokubhatala okungalunganga kunye nembuyekezo kuqikelelo lotyalo-mali? Okanye, ngaba bakho abantu bezemali kubaphulaphuli abanokufuna ukuqikelela la manani aqikelelweyo?
Elinye iqhinga lokukhetha ukukhetha ukuba umntu uza nombuzo wokwenyani kukuthetha into efana nale, yinto ebangela umdla leyo endingakhange ndiyicinge. Ngaphambi kokuba ndikunike ezam iingcinga ngayo, ngaba ukho umntu kubaphulaphuli ofuna ukusinika izimvo zakho ngayo?
Oku kuyakukunika ixesha lokucinga ngempendulo-onokuyidinga xa abanye abantu bezokungena ngokuzithandela ukuphendula umbuzo.
ukunciphisa ukunciphisa ukudumba ebusweni
Iziyobisi ze-malaria e-usa
Ipilisi emhlophe e-oblong a333
ungazithumela njani izinto kwi-ebay
i-hernia yokuzalwa komntwana
ithatha iipesenti ezingakanani ebay